Emere igwe azụ azụ R&D na imepụta ihe karịrị afọ 20.
Zhejiang Fanxiang Mechanical Equipment Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nwere ọkachamara n'ịmepụta na n'ichepụta ngwa ọrụ zuru oke maka imepụta nri azụ mmiri mmiri na mmanụ azụ, chọta na mpaghara mpaghara akụ na ụba mmiri mbụ, Zhoushan City, nke dị nso n'obodo mepere emepe. dị ka Shanghai, Hangzhou na Ningbo, na -ekpuchi mpaghara karịrị 30000m2 yana isi obodo edebara aha nke nde 30.66 CNY.
Ndị isi ụlọ ọrụ anyị bụ ndị mere igwe R&D na imepụta ihe karịrị afọ 20. Ogo ngwaahịa na ụkpụrụ teknụzụ erutela ọkwa dị elu nke ngwaahịa ndị yiri ya na China na mba ọzọ mgbe afọ 20 nke teknụzụ na nchịkọta ahụmịhe. Anyị nwere ahụmịhe bara ụba na ngwa nri azụ kwesịrị ekwesị nke emebere ka ọ na-eche ụdị azụ dị iche iche na mba dị iche iche, na-enwe ezigbo aha na mba ofesi na ahịa ụlọ.
Ọmarịcha nka anyị na ihe okike anyị
Dabere na ndị otu R&D ọkachamara na ndụmọdụ ndị ahịa, anyị ewepụtala usoro nhazi akụrụngwa dị iche iche dabara maka chitin, anụ & nri ọkpụkpụ, fatịlaịza fermented na ngwaahịa ndị ọzọ. Anyị ga na -eme ihe ọhụrụ, na -elekwasị anya n'inye ngwa azụ azụ dị elu ma dabara adaba iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ.
Anyị nwekwara otu ndị nrụnye nwere ahụmịhe na ndị otu ọrụ ịre ahịa ka ịnye ndị ahịa niile ọrụ ruru eru. Mere na-ewu a ọkachamara na-eduga enterprise tụnyere imewe, rụpụta, echichi, mgbe-sales ọrụ na ahịa nke okokụre ngwaahịa.
N'ịgbaso ebumnuche nke "Ịlanarị ịdị mma, zụlite na imepụta ihe", anyị na-atụ anya ka anyị na ndị ahịa niile nweta nkwado na mmepe dabere na ngwaahịa anyị dị elu, teknụzụ ọhụrụ na ezigbo kredit.